'माननीय प्रचण्ड तपाईंलाई देशको माया लाग्दैन ?'
१२ हजार बालबालिकाले लेखे सभासदलाई चिठी
काठमाडौं, ९ पुस – श्री माननीय सभासद् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यू सादर नमस्कार छ । कुशल छु । कुशल चाहन्छु । मलाई देशको माया लाग्छ । तपाईंलाई लाग्दैन र ? अब बन्ने संविधानमा बुबा वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हक सुरक्षित गरियोस् । नयाँ बन्ने संविधानमा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’
रुकुम रुघा गाविस ९ का प्रकाश कठायतले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिठी लेखेर संविधानमा लेख्नुपर्ने कुरा सुझाए । प्रकाशले जस्तै बालमन्दिर उच्च मावि पोखराकी दीक्षा पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई चिठी लेखेर बाल अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
उनले पत्रमा लेखेकी छन् ‘बीउ र विरुवालाई नै राम्ररी हुर्काउन र बढाउन सकिएन भने उक्त रुखले राम्रो फल दिन सक्दैन । त्यसरी नै संविधान सभामा बालबालिकाका हक, अधिकारलाई सम्बोधन हुन सकिएन भने देशको भविष्य नै अन्धकार हुनेछ ।’
दीक्षाले कोइरालालाई विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, बालबालिकालाई राम्रो वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार, सामुदायिक विद्यालय सुविधासम्पन्न बनाउने जस्ता विषय संविधानमा नै समेट्न पनि चिठीमा अनुरोध गरेकी छिन् । दीक्षा र प्रकाश मात्रै होइन देशभरका १२ हजार विद्यार्थीले ६ सय १ सभासद्लाई चिठी लेखेर संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बालबालिकाको हक सम्झाएका छन्।
देशभरका १९ वटा जिल्लाका १२ हजारमध्ये ९ हजार पत्र सभासद्हरुका हातमा पुगिसकेको छ । बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) नेपालको आह्वानमा विद्यार्थीहरुले सभासद्लाई चिठी लेखेका हुन् । कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुले सभासद्हरुलाई चिठी लेखेका छन् । उनीहरुले संविधानमा समेटिनुपर्ने बालअधिकार, शिक्षा लगायतका कुरा प्रमुख रुपमा उठाएका सिविनका कार्यक्रम व्यवस्थापक मधुसुदन दवाडीले बताए ।
केही विद्यार्थीहरुले भने बुँदागत रुपमा संविधानमा समेट्नुपर्ने बुँदा सभासद्लाई सुझाएका छन् । रौतहटको श्रीमाविमा ९ कक्षामा पढ्ने इन्द्रकुमारी कुशवाहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुँदागत सुझाव सहित चिठी लेखेकी छन् ।
नयाँ बन्ने संविधानमा माध्यामिक शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरियोस ।
नयाँ बन्ने संविधानमा हरेक नागरिकले निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरियोस् ।
इन्द्रकुमारीले चिठीमा नेपाली बालबालिकाको अधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको पनि ओलीलाई स्मरण गराएकी छिन् । विद्यार्थीहरुले असोज ६ गतेदेखि सभासद्हरुलाई चिठी लेख्न सुरु गरेका थिए । संविधानसभा भवनमा नै सभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै पहिलो चिठी लेखेका थिए । पुस १६ गते सभामुख नेम्वाङलाई नै अन्तिम पत्र बुझाएर बालबालिकाहरुको राष्ट्रिय चिठी अभियान समापन गर्ने सिविनका दवाडीले जानकारी दिए ।
Source: www.chakrapath.com (Dec. 25, 2014)